Entertainment Archives - Page7of 47 - Popular
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ နဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်ပသွင်းကုန် Scotch Whisky ဟာဆိုရင် မြန်မာ အစိုးရအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့....
၀ပေမယ့်လဲ သူ့အလှတရားနဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာ ပြသသွားမယ့် Miss Plus Size Beauty Queen 2018 အလှမယ်ရွေးပွဲ
“အရင်တုန်းကဆိုရင် ၀တဲ့လူတွေက အပြင်မထွက်ရဲကြဘူး။ ရှက်ကြတယ်။ အခုကျတော့ ဒီလိုပြိုင်ပွဲလေးတွေလုပ်ပေးတဲ့အတွက် ၀လဲ လှတယ်။ အ၀တ်အစားဝတ်တက်ရင် ပြင်တတ်ဆင်တတ်ရင်လှတယ်။ smart ကျတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲတွေကြောင့် ၀တ်ရဲစားရဲလာကြတယ်။ အဲဒီအတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ ၀တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုပြောချင်တာက အိမ်ထဲမှာပဲနေမနေပါနဲ့။ စခံရရင်လဲ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။…
ပို နောက်နှစ်တွေ၊ နောက်နှစ်တွေမှာ ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေဆီ လာပြီးတော့ တစ်လတစ် မြို့လောက် ကျွေးချင်တယ်။ ကိုယ်ရောက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အလှူလုပ်ချင်တယ်။ ပရိသတ်တွေ အကုန်လုံးကို လှူချင်တယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။ ပြီးတော့ . .…
''မွေးနေ့မှာအောင်ဇမ္ဗူတော ရကျောင်း မှော်ဘီမှာ သံဃာတော် တွေကို ဆွမ်းကပ်မယ်။ အဲဒီမှာ သင် ဇာ့ရဲ့ Fan လေးတွေလည်း လာမယ်။ပြီးရင် ရိုက်ကွင်းသွားမယ်။ ရှုတင်က လူတွေကိုလည်း . . .
''အဓိက ပထမဦးဆုံး ပြောချင်တာက ကျွန်တော်ဟာ သရုပ်ဆောင်အသစ် တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ကာရိုက်တာ တိုင်းလည်း မငြင်းဘဲ သရုပ်ဆောင်ရတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကာရိုက်တာလေးကို ပေါတောတောလေး ဆန်ထားတဲ့အတွက် ပရိသတ်ကြီးက ကျွန်တော့်ကို နားလည်ပြီးတော့ ကြည့်ရှုပေးပါလို့။ ကာရိုက်တာမတူတဲ့…
နိုင်ဇော်ကိုယ်တိုင် ရှင်းလင်း တီးပြထားသည့်MOOER GE 200 အပါအဝင်Multi Effecte အသုံးပြုနည်း DVD ထွက်ရှိမည်
''မြန်မာနိုင်ငံမှာ Digital Effect အသုံးပြုနည်းအကြောင်းကို ဘယ်သူကမှ သိပ်မရှင်းပြကြဘူး။ ဂစ်တာသမားတွေအတွက် အလိုအပ် ဆုံးက ဒါပဲလေ။ Digital Effect တွေကို သုံးနည်းဆိုတာ ဘယ်သူမှ မထုတ်ကြဘူး။ အဲဒီတော့ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ဂီတသမိုင်းမှာ…
ကေတုမတီ ပွဲတော်ကြီးရဲ့ ဝင်းခင်း အခမ်းအနား အဖွင့်က အလွန် ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အ ပြည့် နဲ့ လှပသေသပ်ခဲ့ တယ်။ အဓိကသူတွေကို ပြပါ ဆိုရင် မြို့ရွှေမန်းသား ဖိုးချစ်၊ မင်းရာဇာ၊ ဦးမိုးဝင်းတို့…
မြန်မာနိုင်ငံ စာပေထုတ်ဝေသူနှင့် ဖြန့်ချိသူများ အသင်း၏ တတိယအကြိမ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးနှင့် ဆုပေးပွဲ ကျင်းပ
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ စာပေ ထုတ်ဝေသူနှင့် ဖြန့်ချိသူများအသင်း တတိယ သက်တမ်း အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား အတည် ပြု ကြေညာခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေထုတ်ဝေ သူနှင့် ဖြန့်ချိသူများအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်...
'Artistic Travellers အဖွဲ့က အားလုံး စုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ၇ဦးရှိ ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ ပန်းချီပြပွဲတွေ လုပ် လာတာ ၇ ကြိမ်ပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီပွဲကတော့ Artistic Travellers အဖွဲ့ရဲ့…
စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာမောင်မိုးသူနှင့် မန္တလေးမြို့စာပေအနုပညာရှင်များ စာပေအနုပညာစကားဝိုင်းကျင်းပ
စကားဝိုင်းတွင် ဆရာမောင်မိုး သူက မန္တလေးမြို့မှ စာရေးဆရာ၊ စာ ပေအနုပညာရှင်များနှင့် မန္တလေးမြို့ အကြောင်း၊ မန္တလေးမြို့မှ စာပေအ နုပညာရှင်များအကြောင်း၊ ဘဝဖြတ် သန်းမှုရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် အောက်မေ့ဖွယ်ရာအမှတ်တရများ ကို ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာဆွေး နွေးပြော ကြားခဲ့ကြသည်...
သူရွေးချယ်မယ့် ချစ်သူပုံစံကို ပြောပြခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင် မိုးစက်ဝိုင် 67 views
ပန်းနုရောင်အလွမ်း 51 views
အသားအရေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေဖြစ်လဲ အိချောပို 50 views
အကယ်ဒမီ ပိုင်ဖြိုးသု မသေခင်မှာ လုပ်သွားချင်တဲ့ အရာက ဘာလဲ 43 views